सरकारी राहत नपाएकी मनमायाको साहारा बन्दै माईलाकान्छा - Parichay Network
सरकारी राहत नपाएकी मनमायाको साहारा बन्दै माईलाकान्छा
सन्तोष बस्याल द्वारा	 ३ जेष्ठ २०७७, शनिबार १२:१० मा प्रकाशित
पोखरा १७ घारीपाटनकी मनमाया थापा मगर अर्काको घरमा भाँडा माझ्ने काम गर्छिन् । उनका श्रीमान् मजदुरी गर्छन् । जसो तसो जीविको चलिरहेको थियो । तर लकडाउनका कारण काम ठप्प हुँदा के खाने ? के लाउने ? अवस्थामा पुगेका छन् उनीहरु । अर्काको घरमा भाडामा बस्दै आएकी मनमायाका छोरा पुण्य थापा मगर सानै देखिका दृष्टिविहिन हुन् । अझ उनको शरीर चल्दैन बोली फुट्दैन । छिमेकका केटाकेटीहरु दौडिएको देख्दा मनमायाको मन कुडिन्छ । उनका पाँच सन्तान मध्ये अपाङ्ग पुण्य हुन् । एउटी छोरीको विहे भयो । अरु ज्यालामजदुरी गर्छन ।
ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको दुईचार पैसाले मनमायाको परिवार धानिएको छ । कोरोनाका कारण हाल नेपाल लकडाउनमा छ । लकडाउनमा ज्यालमजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरु सबैभन्दा मर्कामा परेका छन् ।
लकडाउनको समय झण्डै दुई महिना पुग्नै लाग्दा सरकारबाट मनमायाले एक केजी चामल समेत पाएकी छैनन् । मनमाया भन्छिन्, ‘घरमा चामल, तेल, नुन छैन । यताउती गरेर जसोतसो जीवन धानिरहेकी छु । आफु भोकै बसेर बालबच्चा पालिरहेकी छु । सरकारले राहत बाँड्यो भन्छन् । तर खै कहाँ बाँड्यो केही पत्तो पाको छैन । छिमेकमै रहेकी बहिनीसँग एक हजार सापट मागेर बिरामी छोरालाई खुवाएकी छु ।”
उमेरले ५० पुगिन् । जीवनको आधा भन्दा बढी उमेर दुख काटेकी मनमायालाई सुखको आश छैन । जिन्दगीको बाटोमा ओरोलो लागिरहँदा केही मनकारी सहयोगी भावना भएका मानिस उनले भेटेकी छिन् ।
उनको आहतले भरिएको जीवनमा राहत बनेर पुगेका छन् माइलाकान्छा । शुक्रबार मनमायाको घरमै पुगेर रु ५० हजार सहयोग गरे उनीहरुले । उनीहरु अर्र्थात माइला (पार्वती गुरुङ) र कान्छा (माया गुरुङ) । महामारीका बेला आपतमा परेका विपन्न परिवारलाई घरमै पुगेर सहयोग गर्ने अभियानमा युकेका मनकारी नेपालीको उनीहरुलाई साथ छ ।
मनमाया जस्तै असहाय परिवारको साहारा बनेका छन् माइला कान्छा । सरकार नपुगेको ठाउँमा उनीहरु पुग्छन् । तीन महिनाको अवधिमा हालसम्म लगभग उनीहरुले १० लाख सहयोग गरेका छन् । वास्तिवक पीडितको अवस्था बुझेर प्राप्त सहयोग रकम सही ठाउँमा पुर्याउन माइलाकान्छा तल्लिन छन् ।